इलाममा ११ करोडमा बहुतले पार्किङसहितको सिनेमा हल बन्दै : RajdhaniDaily.com -
Home अर्थ इलाममा ११ करोडमा बहुतले पार्किङसहितको सिनेमा हल बन्दै
इलाम । इलाम सदरमुकाममा बहुतले मोटर पार्किङ, सिनेमा हलसहितको भवन निर्माण हुने भएको छ । प्रदेश सरकारले गौरवको योजना अन्र्तगत ११ करोड १० लाख ३९ हजार आठसय ३८ रुपैयाँ लागतमा भवन निर्माण हुन लागेको हो ।
नगरपालिकाले तयार गरेको बिस्तृत परियोजना प्रस्ताव अनुसार यस भवनमा एक तला अन्डरग्राउण्ड पार्किङगरी तिनतला पार्किङ र चौथो तलामा दुईवटा सिनेमा हल र फुड कोड रहने इलाम नगरपालिकाका प्रमुख महेश बस्नेतले बताए । बस्नेतले भने, ‘पहिले नगरपालिकाले २३ करोड ६१ लाखको डिपिआर तयार गरेकोमा प्रदेश सरकारले परिमार्जन गरी १७ करोड लागत निकालेका र प्रतिस्पर्दामा ११ करोडमा लागतमा निर्माण हुन लागेको हो ।’
बसपार्कको चार रोपनी क्षेत्रफल जमिनमा बन्ने भवनको दुई वटा सिनेमा हलमा प्रतिहल २ सय ५० जना क्षमताको रहने छ । भवनमा ४७ साना सवारी र दुई सय भन्दा बढी मोटरसाइकल पार्किङ्ग गर्न सकिनेछ । प्रदेश नम्बर १ सरकारले सडक सुशासनको नमुना शहर बनाउने घोषणा अनुरुप इलाममा यो भवन निर्माण हुन लागेको हो । २०७९ चैत्र ३० सम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी कविन्ँद्र नवसिर्जनस जे भि कम्पनीले जिम्मा लिएको छ ।
टेकराज पन्थी - June 21, 2020
संस्कृत भाषाको ‘गृण्ह’ धातुबाट बनेको ग्रहणको सामान्य अर्थ लिनु भन्ने हुन्छ । खगोल वा ज्योतिषशास्त्रमा ग्रहण भन्नाले एउटा आकाशीय पिण्डको छायाले अर्को आकाशीय पिण्डलाई...
Breaking News राजधानी समाचारदाता - November 6, 2020
कोरोनासँग भिड्न नागरिक शिक्षा आवश्यक
बिचार डा. देवीप्रसाद आचार्य - July 2, 2020
नेपालमा ११ चैतदेखि देशभर लकडाउन सुरु गरियो । त्यो समयमा विदेशबाट आएका दुईजना नेपालीमा मात्र कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको थियो । चीन, इटाली, स्पेन,...